सबैभन्दा बढि कमाउने संसारका १० धनी खेलाडी - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
सबैभन्दा बढि कमाउने संसारका १० धनी खेलाडी
प्रमुख व्यवसायिक खेलाडीले अन्य खेलाडीभन्दा धेरै नै पैसा कमाउछन् । विश्वमा सबैभन्दा धनी फुटवल खेलाडी युरोपमा छन् । स्पेन, इटली, जर्मनी, र फ्रान्सलाई खेलाडीहरुको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र मानिन्छ । यी सबै खेलाडओ आफ्नै खुबी र प्रतिस्पर्धी भावले अगाडि आउन सफल भएका हुन् । यहाँ विश्वकै १० धनी फुटबल खेलाडी बारे चर्चा गरिएको छ।
रियल म्याड्रिडका चर्चित खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोले वार्षिक ३२ मिलीयन युरो भन्दा बढि कमाउछन् । २०१५ को तथ्यांकअनुसार उनले हालसम्म २३० मिलीयन डलर कमाईसकेका छन् । पोर्चुगल राष्ट्रिय टिमका कप्तान समेत रहेका रोनाल्डो सबैभन्दा महंगा खेलाडीभित्र पर्दछन् । साथै उनले मोटोरोला, नाइकलगायतका चर्चित ब्रान्डको विज्ञापनबाट पनि पैसा कमाउछन् ।
व्राजिलीयन व्यवसायिक खेलाडी काकाले अमेरिकन प्रमुख लिगको तर्फबाट खेल्दछन् । यीनले रियल म्याड्रिडमा हुदा धेरै कमाएका थिए । यी पनि सबैभन्दा महंगा खेलाडी मध्ये पर्दछन् । यिनको तलब ८.२ मिलीयन डलर रहेको छ । काकाले हालसम्म जम्मा ९७ मिलीयन युरो कमाएका छन् ।
७. स्याम्यअल एटो-क्यामरुनका फुटबल खेलाडी स्यामुअललाई स्ट्राइकर भनेर पनि चिनिन्छ । यिनलाई सबैभन्दा चर्चित अफ्रिकन खेलाडी मानिन्छन् । महंगा खेलाडी भित्र पर्ने यिनले वार्षिक २५ मिलियन युरो कमाउछन् भने जम्मा ९५ मिलीयन युरो कमाईसकेका छन् ।
८. राउल –स्पेनका व्यवसायिक फुटबल खेलाडी राउलले १६ वर्षकासम्म रियल म्याड्रिडका तर्फबाट खेलेका छन् । उनी सबैभन्दा बढि ३२३ गोल बनाउने खेलाडी हुन् । यिनले हालसम्म ९३ मिलीयन डलर आम्दानी गरेका छन् ।
९. रोनाल्डिनो ब्राजिलीयन लिजेन्ड भनेर चिनीने यी खेलाडी मेक्सीकन क्लबको तर्फबाट खेल्दछन् । रोनाल्डिनोले फिफा कप खेलाडी २००४ र २००५ जितेका थिए । ९७ खेल खेलेका यिनले ३३ वटा गोल गरेका छन् । यिनको हालसम्मको कुल आम्दानी ९०.५ मिलीयन डलर रहेको छ ।
10. फ्र्यांक ल्याम्पार्ड- इंग्लीस फुटबल खेलाडी रहेका यीनले म्यान्चेस्टर सिटीको तर्फबाट खेल्दछन् । यी खेलाडी चेलेसासंग थिए भने सदैब गोल गर्नमा साथ दिन सिपालुको रुपमा चिनिन्छन् । ल्याम्पार्डले हालसम्म जम्मा ८० मिलीयन डलर कमाइसकेका छन् ।
Previousअब फेरि युद्धः बिप्लब
Nextचन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन खोज्दा देउवा यसरी आत्तिए !